जियोमेडिया र GvSIG - Geofumadas बीच तुलना
सेप्टेम्बर, 2008 जियोस्पाटियल - जीआईएस, GvSIG
वर्तमान कामको सारांश हो प्रस्तुत"जीआईएस को तुलना खुला स्रोत र व्यावसायिक जीआईएस आधारित" कागज मा द्वितीय खुला स्रोत जुआन Ramon Diaz र JORDI Rovira Mesa Jofre द्वारा जीआईएस मा GvSIG र Geomedia उपकरण बीचको तुलना छ; यद्यपि यो GVSIG को रूप मा मजबूत को रूप मा वैकल्पिक विकल्प को बिना यो SEXTANTE र हाल को सुधारहरु को रूप मा; मलाई लाग्छ यो एक धेरै दिग्गज काम हो।
दुर्भाग्यवस, यसको लागि, यो पोष्ट लामो हुन र एक छिनका लागि यसको ढाँचा गुमाउन आवश्यक छ, यद्यपि यो केहि संक्षिप्त गरिएको छ। तपाईं पूर्ण प्रस्तुतीकरण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ देखि.
यद्यपि मलाई स्वीकार्नु पर्छ कि यी प्रविष्टिहरूमा मैले Dreamweaver मिसाइलको सही नियन्त्रणको लागि छु जुन WordPress ले अनुमति दिँदैन
कार्यक्षमता परिणाम CONCLUSIONS
आधारभूत कार्यक्षमताहरू परियोजना कन्फिगरेसन: दुई GIS सम्भावनाहरूमा तुलनात्मक छ, जियोमीडिया प्रो नक्शा दृश्य घुमाउने संभावना प्रदान गर्दछ। लेजेंन्ड व्यवस्थापन: gvSIG जमोडिया प्रो सम्म छैन, किनकि जडान अवधारणा को शामिल गर्दैन, जो मौजूदा संस्थाहरु को जीआईएस मा खुली तहहरु को अलग कनेक्शन देखि स्वतंत्र हुन को लागि अनुमति दि्छ। तह सम्पादन: हामी gvSIG ड्राइंग कमांड लाइन, सीएडी शैली, र Geomedia प्रो मा एकदम ठूलो को संख्या मा हाइलाइट। विषयवस्तुहरूको सिर्जना: GvSIG र Geomedia यस बिन्दुमा मेल खाएको छ, दुई जीआईएसले सिर्जनालाई केहि सुविधाहरूको साथ एकल मूल्य वा श्रेणी अनुसार अनुमति दिन्छ। हामीले एउटै वजनलाई चार खण्डहरूमा दिइएको छ (प्रति खण्डमा 25%)। अन्तिम परिणाम हो: जियोमीडिया प्रो gvSIG भन्दा माथिको आधारभूत कार्यात्मकताका आधारमा। जहाँ खण्डमा GvSIG ले कम्तीमा खडा गरेको छ, लेन्सको व्यवस्थापन हो, यसको कारण कठोरताले गर्दा प्रत्येक वजन लुकाउन वा GIS मा अवस्थित जडानहरूको संस्थाहरू सम्मिलित गर्न अनुमति नदिने, किनभने जडानको बारेमा उपेक्षित अभिमुखिकरण अवस्थित छैन।
स्थानिय विश्लेषण Functionalities: त्यहाँ विश्लेषणका चार सम्भावित कोटीहरू छन्: विशेषताहरू, ओभरलेहरू, बफरहरू, र टोपोलॉजिकल क्वेरीहरू द्वारा पुन: वर्गीकरण चार gvSIG र Geomedia प्रो मा, तिनीहरूसँग कार्यक्षमता प्रतिनिधित्व छ। यद्यपि gvSIG मा कार्यहरू पूर्ण रूपमा शोषण गरिएको छैन। विधि: प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट, भौगोडिया प्रो स्थानिय विश्लेषणको विभिन्न कार्यक्षमताहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ। एक स्क्रिनमा प्रयोगकर्ताले कुन संस्थाहरूसँग काम गर्न चाहन्छ भन्ने निर्णय गर्दछ, जुन लागू सम्बन्धी सम्बन्ध र फिल्टरलाई विशेष गरी फिल्टर गर्दछ। GvSIG मा, विश्लेषणको सबै आउटपुट एक Shapefile फाईलमा बचत गरिन्छ जुन यसले तीन फरक विश्लेषणहरू लिंक गर्न सम्भव छ, यो दुई मध्यवर्ती फाइलहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ जुन कुनै पनि प्रयोगको होइन। स्थानिय विश्लेषण एक GIS को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षमता मध्ये एक हो जब यो गुणस्तर जानकारी उत्पन्न गर्न आउँछ, र सबै भन्दा माथि यो एक CAD बाट GIS फरक छ। यस आधारभूत पक्षमा हामीले दुई बिन्दुहरूको मूल्यांकन गरेका छौं, प्रत्येक GIS द्वारा समर्थित विभिन्न कार्यात्मकता (वजन 60%), र विधि (वजन 40%) वा प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोण स्थानिक विश्लेषण प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगबाट प्रयोग गर्दछ। रास्टर क्षमता: georeferencing, formats, filtering र हेरफेर। निष्कर्ष: छोटो समयमा, गियोडियाडिया प्रो विश्लेषणात्मक क्षमताओंमा छ र प्रयोगकर्ताको लागि सुविधाहरूमा। GvSIG एक धेरै जवान उत्पादन हो, र यसले यसको केही कार्यात्मकताहरू सुधार गर्न पनि छ।
रेस्टर क्षमता हामीले यस सम्बन्धमा तीन फरक अवधारणाहरू मूल्याated्कन गरेका छौं: छविहरूको जियोरेफरेन्सिंग (तौल weight 35%), ओर्थोफोटोसको दृश्य (वजन% 35%); र, georeferd छविहरु को फ़िल्टरिंग र हेरफेर (वजन 30%)। छविहरूको भौगोलिकरण: यो उपकरण दुई GIS मा समान रूपमा सहज छ, तर GvSIG मा धेरै अस्थिरता, धेरै अवस्थामा, यो त्रुटि त्रुटिमा समाप्त हुन्छ, किनकी यो gvSIG मा तल दिईएको मूल्याङ्कन गरिएको छ। Orthophotos प्रदर्शन: जियोमिडिया प्रोफेसर र gvSIG काम गर्न सक्ने भू-संदर्भित रास्टर फार्मेटको विस्तृत विविधता प्रमाणित गरिएको छ। फिल्टर गर्दै र हैंः यस खण्डमा, gvSIG ले यसको रास्टर पायलट एक्सटेन्सनको लागि धन्यवाद उच्च छ। यसले तपाईंलाई चित्रमा सांख्यिकीय डेटा (हिस्टोग्राम) को विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ, जुन कम पास द्वारा स्मोथिंग जस्ता फिल्टरहरूको अनुप्रयोगमा। CONCLUSIONS: दुई GIS मिल्दो छ, यो अंतर Geomedia प्रो द्वारा छवि भौगोलिकरण उपकरणमा प्रदान गरिएको स्थिरता हो, जबकि gvSIG यसको रास्टर एक्सटेन्सनको लागी उत्तम फिल्टरिंग र हेरफेर क्षमताहरू देखाउँदछ।
अन्तरक्रियाशीलता यस पक्षमा, अन्य डेटा स्रोतहरूसँग GIS को अन्तरक्रियाको अध्ययन गरिन्छ, अन्तरक्रियात्मकता GIS को एक राम्रो भिन्नता कारक हो। हामी विश्व स्तर को पहलू को मूल्यांकन गर्नेछ र डेटा स्रोत को चार श्रेणियों मा विभाजित गर्नेछ: जीआईएस प्रारूप, सीएडी स्वरूप, डेटाबेस र ओजीसी मानक।SIG ढाँचाहरू
ArcInfo, ArcView, Shapefile, फ्रेमा, जियोमेडिया स्मार्टस्टोर, Mapinfo
माइक्रोसफ्ट पहुँच, माइक्रोसफ्ट SQL Server, MySQL, Oracle स्थानिक / लोकेटर, PostgreSQL / PostGIS
जीएमएल, WFS, WMC, WMS, WCS
निष्कर्ष: Geomedia प्रो, जीआईएस हो कि DWG जस्तै सीएडी ढाँचामा डाटा निर्यात गर्न क्षमताहरू विभिन्न डाटा स्रोतहरू (माइक्रोसफ्ट पहुँच, ओरेकल ...) पढ्न र लेख्नको लागि ठूलो क्षमतासँग सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता प्रदान गर्दछ। GvSIG ओजीसी मानकसँग काम गर्न इच्छुकतामा उभिएको छ, र एक राम्रो भविष्यवाणी जब यो PostgreSQL / PostGIS संग एक डाटाबेस को रूपमा ओरेकल को शामिल गर्न आउछ।
प्रदर्शन प्रदर्शनको मूल्या To्कन गर्न, हामी ओभरहेड (वजन %०%), ह्यान्डलिंग स्पीड (तौल %०%), र स्थानिक विश्लेषण एल्गोरिदम (वजन %०%) को अप्टिमाइजेशन मापन गर्न चाहन्थ्यौं। मा अधिभार माप, gvSIG जिओमेडिया प्रो भन्दा छिटो थियो। जियोमेडिया परिणामहरू मापन गरिएको समय 50०% ले सुधार गर्दछ, केवल शेपफाइलबाट Geomedia Smartstore मा डाटा ढाँचा परिवर्तन गरेर। मा गतिको मापन व्यवस्थापन हामी जानकारीको ठूलो मात्रा एक तह बाट अर्कोमा सार्छौं। GvSIG फेरि Geomedia प्रो भन्दा छिटो छ। अनुकूलन को उपाय स्थानिय विश्लेषण एल्गोरिदम को, जियोमेडिया ले ब्लूटूथ गरेको छ: उपकरण स्थिरता र गति। GvSIG मा तपाईंको जेटीएस लाइब्रेरी वा निश्चित टोपोलोजिमहरूसँग काम गर्ने असक्षमताको कारणले गर्दा त्रुटिहरू छन्। CONCLUSIONS: gvSIG ज्यामोडिया प्रोभन्दा छिटो छ, ग्राफिक रूपमा प्रतिनिधित्व वा हिड्नु
एक तहबाट डेटाबेसमा डेटा, जानकारीको ठूलो मात्रा। अर्कोतर्फ, Geomedia प्रो स्थानिक विश्लेषण प्रदर्शन गर्दा स्थिरता र गति मा बाहिर छ, यसैले, यो gvSIG भन्दा बढी छ।
GIS अनुकूलन हामी विश्वव्यापी रूपमा तीनवटा फरक प्रश्नहरूको मूल्यांकन गर्छौं: कि GIS निजीकरण, भाषा वा लिपिको प्रकार जसले यसलाई सम्भव बनाउँदछ। र, अवस्थित दस्तावेज। SIG अनुमति दिन्छ अनुकूलन? दुवै अवस्थामा यी जवाफ सकारात्मक छ: हो! भाषा वा स्क्रिप्टको प्रकारहरू, gvSIG सँग एक लिपिङ् भाषा (जेथन) छ र तपाईं gvSIG कक्षाहरू प्रयोग गरेर जाभामा विस्तारहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। Geomedia प्रोमा, यो Visual Basic भाषाहरू 6.0 र नेटमा विकसित गरिएको छ, यसको वस्तु पुस्तकालयहरूमा एकीकृत आदेशहरू सिर्जना गर्न वा GIS को बाह्य कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न। दस्तावेज, जिओमेडिया प्रोसँग विस्तृत कागजात छ जहाँ प्रत्येक वस्तु वर्णन गरिएको छ र उदाहरणमा धनी छ। GvSIG मा, कागजात विरलै र गहिरो छ। प्रत्येक घटक र gvSIG वर्ग वास्तुकलाको विवरण हराइरहेको छ, साथ साथै आवश्यक वर्गहरूको पूर्ण विवरण। CONCLUSIONS: दुई GIS मा, अनुकूलन समाधान राम्रोसँग समाधान गरिएको छ। GvSIG कागजातमा मूल्यांकन नकारात्मक छ। एक विशेषज्ञ GIS प्रोग्रामर को लागी gvSIG भन्दा Geomedia प्रो लाई अनुकूलन गर्न को लागी सजिलो छ, gvSIG कागजात मा फाटो को कारण।
3D क्षमता हामीले Z समन्वय (तौल %०%) को सम्पादन क्षमताको मूल्या have्कन गरेका छौं, थ्रीडीमा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व (40०%); र, भोल्यूम को प्रतिनिधित्व (वजन 3%)। निष्कर्ष: न त जीआईएस मूल्यांकन, मात्र बारेमा दुई क्षमता मा Geomedia प्रो excels अनुच्छेद मा गम्भीर अवसर प्रदान गर्दछ: geocode को Z समन्वय र अन्य स्वरूप गर्न निर्यात राख्न; र संभावना, एक बाहिर कम्पनी Intergraph द्वारा सिर्जना आदेश संग, एक्सट्रूजंस titrations र प्रदर्शन पोलिगनहरुको Google धरती देखि प्रदर्शन वा Geomedia भू-भाग, इच्छित functionalities एक पूरक उत्पादन संग काम। gvSIG यी सम्भावनाहरू gvSIG भविष्य 3D जारी संस्करणमा उपलब्ध हुनेछ।
नक्सा हामीले पहिले नै परियोजनाको मेमोरीमा प्रतिबिम्बित गरेका छौं, नक्साको जेनेसनले GIS प्रयोगको लागि अन्तिम कारण हो। यस पक्षमा हामीले परिणामको उज्यालोपन (वजन 50%) र चमक (वजन 50%) परिणामको मूल्यांकन गरेका छौं। उपयोगिता: Geomedia प्रोमा, म्यापिङ उपकरण अधिक सहज हुन सक्छ, तथापि नक्सा सिर्जना गर्ने प्रक्रिया सजिलो छ। GvSIG मा, हामी एक उपकरण फेला पार्न सजिलो छ र प्रयोगबाट सजिलै संग सहज हुन्छ जुन, प्रदर्शन विशेषताहरू गुमाए पछि, तपाईं नक्साको मापन पट्टी सार्नु पर्दछ बाहेक; अर्कोतर्फ यो नक्शाको सीधा पीढी PDF सँग मुआवजा गरिएको छ। Vistosity: दुवै gvSIG रूपमा Geomedia प्रो, एक आकर्षक मानचित्र उपकरण सिर्जना गर्न सबै आवश्यक उपायहरु प्रयोगकर्ता पहुँच गरे: सम्पादन क्षमताहरु, प्रतीक अनुकूलता सम्भावनाहरू र मात्रा बारहरू (प्रारूप: GeoMedia मा gvSIG र डब्लुएमएफनिर्यातफिल्टर मा एसभिजि), को लिजेन्ड सम्पादन । CONCLUSIONS: दुई GIS एकअर्काको बराबर हो, धेरै पेशेवर नक्सा सिर्जना र रचना गर्न दुई उपकरणहरूसँग।
कागजात र समर्थन प्रयोगकर्ताको अपर्याप्त दस्तावेज वा अपर्याप्त समर्थनले प्रयोगकर्तालाई GIS को प्रयोग छोड्न वा छोड्न सक्छ। यसलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि, हामीले विश्वव्यापी मूल्याङ्कन गर्न बराबरको वजनको साथ दस्तावेज र समर्थन दुई भागमा विभाजन गरेका छौं। दस्तावेजGeomedia प्रो को मामला मा, आकलन धेरै सकारात्मक छ, त्यहाँ आवश्यक उदाहरण संगै सबै प्रकारको दस्तावेजीकरण, Geomedia प्रो संग स्थापित छ। gvSIG मा न्यूनतम स्थापित दस्तावेज बिना सबै कागजात डाउनलोड गर्न को तथ्य संग। उपकरण र विकास दस्तावेजको सतहीता हामीलाई यस बिन्दु सकेसम्म मूल्यवान छैन गर्न बाध्यता। समर्थन: GvSIG को साथ यो अन्तिम डिग्री परियोजना मा अनुभव यो हो कि, तीन घण्टा भित्र, प्रयोगकर्ताहरूको सूचीको साथ प्रश्न उठाए पछि, एक प्रभावकारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। प्रयोगकर्ता सूचीमा gvSIG द्वारा बनेको शर्त प्रदर्शन गर्दै। यो रोक्दै कि कुनै पनि समयमा प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि घटनाको अगाडि एक्लो रहनको भावना हुँदैन। इन्टरग्राफको धेरै वर्षको अनुभवले यसको प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू सकारात्मक रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। जियोमिडिया प्रोलाई प्रदान गरिएको समर्थन तीन तरिकामा गरिन्छ: ज्ञान डाटाबेस, अनलाइन र टेलिफोन समर्थन। CONCLUSIONS: उपकरणको लागि प्रदान गरिएको समर्थनमा, दुई GIS समतुल्य छन्। दस्तावेज को पहलू मा Geomedia प्रो gvSIG को सामने, गुणवत्ता र अनुकरण मा। हामी ज्यामोडिया प्रोमा धेरै सकारात्मक मान्दछौं, उपकरण स्थापना गर्दा दस्तावेजको तैनाती, प्रयोगकर्ताले वेब लिङ्क मार्फत सबै आवश्यक कागजातहरू प्राप्त गर्न को लागी gvSIG मा।
आर्थिक पहलुहरु प्रत्येक GIS को लागत (इजाजत पत्र, प्रशिक्षण, अनुकूलन, रखरखाव…) तर्क गरिएको छ, पहिलो दुई बर्षको अवधिमा इजाजतपत्र कार्यान्वयनको आर्थिक लागतको उदाहरण। र, मूल्य निर्धारण उत्पादनसँग मिल्छ कि भनेर निर्धारण गर्दै। निष्कर्ष: Geomedia प्रो को लागत gvSIG भन्दा माथि छ, तथापि, Geomedia प्रो एक धेरै स्थिर उत्पाद हो Intergraph बाट राम्रो समर्थन प्रतिक्रिया संग। जवाफ हुनेछ: दुई सिग्समा उनीहरूको मूल्यको मूल्य छ।
इजाजतपत्र लागत 13.000-14.000 €0€
लाइसेन्स मर्मत लागत 2.250 €0€
समर्थन लागत रखरखाव लागत मा शामिल: टेलिफोन समर्थन, प्रयोगकर्ता सूची; र, यदि लाइसेन्सको मात्रा महत्त्वपूर्ण छ भने, क्लाइन्टको कार्यालयहरूमा साधारण व्यक्तिको टेक्निकल। 0, समर्थन प्रणाली प्रयोगकर्ता सूचिहरूमा आधारित छ र 24-48h मा एक संसोधनको संकल्प गरिएको छ।
प्रशिक्षण लागत 900 € 27 घंटा5दिनहरुमा 300 € 20 घन्टा को एक कोर्स।
अनुकूलन को लागत 500 € -700 € पुरुष / दिन 240 € - 320 € मान्छे / दिन।
परिणाम तालिकामा, हामी प्रत्येक पक्षको मूल्यांकन देखाउँछौं; र, प्रत्येक सिगको समग्र मूल्याङ्कन; हामीले 1 बाट5बाट वजन गर्यौं जहाँ मैले यसलाई0बाट 100% मा अनुवाद गरेको हो: 20% def
40% अपर्याप्त छ, 60% पर्याप्त छ, 80% उल्लेखनीय छ; र, 100% उत्कृष्ट छ यो दिलचस्प छ कि सामान्यमा, gvSIG एक धेरै रोचक प्रवृत्ति छ जुन एकदम राम्रो स्थिर विकल्प बन्न सक्छ, खासगरी जब यो राम्रो तरिकाले परिभाषित माध्यमिक विकास योजना छ।
आश्रित पहलू ज्यामोडिया प्रो GvSIG
GIS को आधारभूत प्रकार्यहरू 100% 80%
स्थानिय विश्लेषण 100% 80%
रेस्टर क्षमता 80% 80%
विभिन्न डेटा स्रोतहरु संग अंतरतापन 100% 80%
प्रदर्शन 80% 80%
SIG को बाहिर अनुकूलन क्षमता, लिपिहरू वा भाषाहरू 100% 60%
क्षमताहरू 3D 40% 20%
नक्सा 100% 100%
कागजात समर्थन 100% 80%
आर्थिक पहलुहरु आकलन गर्न 100% 100%
ग्लोबल मूल्यांकन SIG 100% 80%
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो स्वत: डिजाइनले तपाईंलाई राम्ररी डिस्प्लेको प्रदर्शन देखाउनेछ
अर्को पोस्ट बिल्डर्स हास्यअर्को »
२ जवाफ "जिओमेडिया र GvSIG बीचको तुलना" लाई
नमस्ते, धेरै राम्रो ब्लग, यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने, मेरो वेबसाइटमा जानुहोस्, एक टिप्पणी पोस्ट गर्न।